Okuhlobisa amashidi ensimbi engagqwali Abakhiqizi - China okuhlobisa insimbi engagqwali amashidi Factory, abahlinzeki
Insimbi engagqwali amashidi perforated (0.3mm-8mm)
Ibanga: 304 304L 304DQ 316 316L 201 202
Ubukhulu: 0.3mm - 8.0mm
Pallet isisindo: 25MT
AmaSpredishithi Engagqwali akhiqizwa ngenani elikhulu lamamaki ekhwalithi ancike ekusetshenzisweni komkhiqizo. Isitoko esikhulu siyatholakala ngamamaki ahlukene ensimbi. I-1.4031 / 1.4037 (304 / 304L) ibanga lensimbi elitholakala kakhulu futhi lisetshenziswa kakhulu kumashidi wensimbi angenansimbi. AmaSpredishithi Wensimbi Engagqwali nawo enziwe ngokuqedwa okuhlukahlukene ngenxa yenani labo elikhulu lezinketho zohlelo lokusebenza. Okunye ukuqeda okuvamile okudumile emakethe ama-2B, # 3 pholisa amashidi wensimbi angenasici, amashidi wensimbi angenasici angama- # 4 ne- # 8 Mirror Finish. Isiphetho esisetshenziswa kakhulu kumashidi wensimbi engagqwali i- # 4.
Insimbi engagqwali etching ipuleti ebusweni engagqwali ngokusebenzisa indlela amakhemikhali, ukugqwala aphume ezihlukahlukene patterns.With 8K esibukweni ipuleti, wiredrawing ipuleti, sandblasting ipuleti njengoba ipuleti phansi, emva kokwelashwa ukufakwa, ebusweni into for eminye ukucubungula, ipuleti lensimbi engagqwali ingafeza indawo nokusanhlamvu, ukudweba, ukufaka igolide, i-titanium yegolide yendawo nokunye ukucubungula okuyinkimbinkimbi, ipuleti lensimbi engagqwali yokufeza ukukhanya kwephethini nomphumela omnyama nombala.
Ukwenza imidwebo ngokuyisisekelo kusho ukudala izinhlobo ezithile zemiklamo, okuvelayo noma amaphethini kwenye indawo efana nephepha, indwangu, insimbi noma isikhumba. Amashidi wensimbi angenalutho aqoshwe kakhulu enziwe ngensimbi enamatshe futhi asetshenziswa emikhakheni eminingi ikakhulukazi ezindaweni eziphithizela kakhulu. Inqubo yokukhiqizwa kwalawa mashidi ifaka ukugoqelwa kwamaphethini ahlukile kumashidi. Amanye amaphethini athandwa kakhulu ongawafunela umsedari onzima owenziwe ngesaha, okusanhlamvu kwezinkuni, okusanhlamvu kwesikhumba, okusanhlamvu kwesimo sezulu kanye ne-stucco.